Ovy voatoto miaraka amin'ny taolan-kisoa - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Ovy notetehina niaraka tamin'ny taolan-kisoa
Carnes49 minitraOlona 4
Ny ovy nandrahoina miaraka amin'ny taolan-kisoa dia koba tsara totozy. Natao tamin'ny Thermomix® izy ary tiako bebe kokoa isan'andro satria manankarena sy mora azo.
Sakafo mahafinaritra ny manomana amin'ny faran'ny herinandro a Sakafo ankohonana satria, ankoatry ny manankarena dia mihinana azy amin'ny fomba miavaka ny ankizy.
Tian'izy ireo ny ovy sy ny ron-kena ary matetika aho koa manetika ny sasany amin'izy ireo taolan-tehezana tena mijanona izany be ranony amin'ny fandrahoan-tsakafo ary tsy "baolina" hoy izy ireo.
Tiako ny manompo azy rehefa vita izany ary ento eo anelanelan'ny "puff sy sip". Fahafinaretana izany mihamafana miaraka amin'ny sakafo ary indrindra amin'ny lafaoro tsara.
Ity fomba fahandro ity matetika no anaovana azy taolan-tehezana voahosotra, na dia tsy matetika no mividy an-tsiranoka azy ireo aho, ka tsy matsiro loatra ho an'ny dwarf ahy.
1 Ovy notetehina niaraka tamin'ny taolan-kisoa
Sakafo matsiro sy lafatra mandritra ny andro mangatsiaka.
Fotoana hiketrehana: 49M
Fotoana manontolo: 49M
100 g ny dipoavatra maitso
100 g ny dipoavatra mena
70 g ny menaka oliva virijina
Rano 300 g
Taolan-tehezana marihitra 600 g, tapatapahina ho tapa-kazo
Ovy 500 g, voahitsakitsaka ary tapatapahina
kininina kely iray
pinch ny voanjo
Apetrakay ao anaty vera ny tongolo, tongolo lay ary sakay. Manaikitra isika mandritra 4 segondra, hafainganam-pandeha 5. Izahay dia mampidina ny sisa tavela amin'ny rindrina mankany amin'ny lelany miaraka amin'ny spatula.
Arotsanay ao anaty vera ilay menaka ary endasina 10 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 1.
Apetratsika amin'ny lolo ny lolo, ampio ny taolan-tehezana sy programa 4 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 1.
Manampy rano sy programa 100 gr izahay 10 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 1.
Ampio ny ovy sy ny ravina bay. Sauté 3 minitra, 100º, fihodinana havia, hafainganam-pandrefesana.
Ampio ny rano sisa (200 g) sy ny zava-manitra. Izahay dia manao fandaharana 22 minitra, 100º, fihodinana havia, hafainganam-pandrefesana, nefa tsy apetraka ilay bikabao. Apetrakay eo amboniny ny harona mba tsy hiparitaka.
Rehefa vita dia apetrakay ao anaty lovia lalina izy io ary aroso.
Fanazavana fanampiny - Taolan-tehezana tantely
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Carnes, Celiac, Tsotra, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny adiny 1, Resipeo ho an'ny ankizy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Carnes » Ovy notetehina niaraka tamin'ny taolan-kisoa
102 hevitra, avelao ny anao
Ataoko ity karazana masaka ity saika tsy misy ron-kena mba ho toy ny barbecue lazaintsika eto izahay, ny zava-misy dia rehefa mihinana azy amin'ny tsorakazo sy antsy izy ireo dia tsy misy olana ary matsiro izany, sa tsy izany?
Marina izany, Thermo, matsiro. Raha tsy misy broth dia ho matsiro ihany koa. Mirary ny soa indrindra.
Salama e !!
Toa matsiro izany ... Te hanontany anao fotsiny aho, ireto recette ireto dia ho an'ny TM-31, sa tsy izany?
Satria manana ny TM-21 aho ary tsy mety ny safidy mihodina miankavia sy ny hafainganam-pandeha….
Ny hahafantarana raha misy safidy ao amin'ny TM-21 dia ireo
Salama Carmen, rehefa mametraka ny «fihodirana ankavia sy ny hafainganam-pandehan'ny sotro» isika, dia tsy maintsy mametraka ny lolo eo amin'ny lelany sy ny hafainganam-pandeha 1 ianao.
Manantena aho fa tianao izany. Mirary ny soa indrindra.
Paula dia hoy izy:
Bonjour, efa nanao an'ity recette ity aho fa normal ve raha mivoaka ho azy ny lolo dia rava daholo ny ovy? Rehefa miverina any an-dakozia aho dia misy vavan'ny lolo mipoitra avy amin'ny lavaka eo amin'ny sarony. Tsy maintsy alatsakao amin'ny lelany fotsiny izany, sa tsy izany? sa tsy maintsy maneno "click"?
Misaotra betsaka amin'ny zavatra rehetra.
Mamaly an'i paula
Paula, tena tezitra izaitsizy ianao fa tsy nahita an'io taloha ary potipotika ny ovy satria tsara be ilay recette.
Izany no nitranga tamiko tao anaty laoka vitsivitsy, saingy tao an-dakozia aho ary afaka nanakana ilay masinina, nampidina ny vera tao anaty lovia ary namerina ny lolo.
Apetraho eo amin'ny lelan'ny lolo ny lolo ary atodiho miankavanana izay mifanaraka aminy, ary sintonina miakatra izy mba hahazoana antoka fa mifatotra tsara izy ary tsy miala. Saingy tsy mila mandre "clicks" ianao.
Andramo indray fa ho tianao ny fomba fahandro.
Paula, valiako indray ity fanontaniana ity satria ity faran'ny herinandro ity no kongresy thermomix voalohany ary nahalala zavatra tsy maintsy holazaiko aminao aho amin'ny fanitsiana ny valiny nomeko anao rehefa nanontany ahy momba ny lolo nivoaka ianao. Ny fomba nilazako taminao ny hametrahana azy dia ilay mety raha aorian'izay dia apetratsika ny elatra hivadika ankavanana, fa raha aorintsika ho amin'ny ankavia isika dia tokony hametraka sy hifanaraka tsara amin'ny lolo ankavia isika, satria raha tsy izany dia tena azo inoana fa amin'ny fihintsanana vitsivitsy voalohany dia hivoaka.
Miarahaba ary manantena aho fa hahatadidy an'ity antsipiriany kely ity foana isika miaraka amin'ilay sakaizantsika lolo.
salama maraina Ramatoa na malahelo. Eto amin'ity pejy ity aho dia mahita data izay 4 taona lasa izay ary tsy fantatro ny dikan'izany. Fa hey, raha fintinina, ny fangatahako dia ny nanaovako ity fomba fahandro ity ho an'ny taolan-tehezana miaraka amin'ny ovy, nandika ara-bakiteny ny resipeon'ny House ary tamin'ny fotoana roa dia nivoaka madio tanteraka ny ovy.
Afaka mitari-dalana ahy ianao. Misaotra anao indrindra. Lazao fa manana ny maodely farany an'ny masinina aho.
Salama Adolfo, andramo apetraka ny ovy lehibe kokoa noho ny habeny, mba tsy hiraraka izy ireo mandritra ny fandrahoana sakafo na hanampy azy ireo avy eo. Angamba ny ovy ampiasainao malefaka kokoa noho ny eto.
tsaraiiiiiimoimo !! Ataoko miaraka amina divay fotsy fotsy ihany koa ny endasina ary mahavariana! oroka
Misaotra betsaka Marta, hevitra tsara amin'ny manaraka fa hanandrana azy amin'ny alàlan'ny divay aho, izay tena tsara amin'ny stews.
mayka dia hoy izy:
Vaovao amin'ny TM aho, na dia efa nandraho nahandro nahandro be dia be aza ny karazana ahariharinao ary ny tena izy dia tianay any an-trano izy ireo, saingy amin'ity resipeo ity dia tsy azoko tsara hoe ahoana no ampidirina ny taolan-tehezana, azonao hazavaina ho ahy azafady ...?
Mamaly an'i mayka
Salama Mayka, totozy aloha ny tongolo, tongolo gasy sy sakay. Manampy ny menaka ianao ary mandahatra azy mandritra ny 10 minitra. Aorian'ity indray mitoraka ity dia apetrakao amin'ny lolo ny lolo ary ampio ny taolan-tehezana.
Manantena aho fa tianao izany, raha manana fanontaniana ianao, mba ampahafantaro anay. Mirary ny soa indrindra.
Tiako ianao handefasa amiko ny fomba hanamboarana hena voatetika
Mamaly an'i gertrudis
Gertrudis Hiezaka hitady anao ny fomba fahandro momba ny hena voatetika, raha hitako dia ampitaiko aminao.
Salama, ny fanontaniako dia ny hahafantarako raha toa ka apetraka amin'ny lelany daholo ny laoka, tsy esorina intsony io mandra-pahatapitry ny laoka, olona vao avy aho ary mbola manana fisalasalana, misaotra
Salama Monica, tsy esorina hatramin'ny farany ny lelany. Toy izany no tsy hianjeran'ny ovy. Manantena aho fa tianao izany. Mirary ny soa indrindra.
ANGELES PEREZA dia hoy izy:
Tena tiako ny pejinao. Handefa anao ny fomba fahandro tena tian'ny ankizy.
100 gr. Maria cookies
Valopy 1 amin'ny curd
Cookies sy siramamy 5 segondra hafainganam-pandeha 5
valopy misy ronono sy curd 8 minitra 90 hafainganana 2
Valio amin'i ANGELES PEREZ
Tsara toa inona ity mofomamy ity, Mª. Anjely!. Hataoko izany. Misaotra betsaka.
Hanao an'ity mofomamy ity aho saingy manana fisalasalana: ny cookies sy ny siramamy dia tsy maintsy mijanona ao anaty vera rehefa ampiana ronono sy curd na ampiana aorian'ny 8 minitra.
Tena tsara ny laoka
Juani, apetraho amin'ny fanehoan-kevitra ny mofomamy tianao hatao ity fanontaniana ity, tsy fantatro tsara hoe inona ny mofomamy tianao holazaina amin'ny fametrahana ny fanontaniana ao anaty masaka. Mirary ny soa indrindra
Anna Miracles dia hoy izy:
Tena tsara, ny vadiko dia tena tia azy ireo, misaotra anao noho ny resinao
Valiny tamin'i Ana Milagros
Ana, faly aho fa tianao izy ireo, ny fianakaviako koa tia azy ireo.
Misaotra anao namporisika anao hanomana ny resinay.
ROSE MARIA dia hoy izy:
TE Hahafantatra NY RESIPON'NY POTATO RIBBED aho, manana ny masinina taloha aho ary izay mandeha haingana ary mandao ny fomba fanaoko azy
Valiny amin'i ROSA MARIA
Rosa Maria, apetrakao ny lolo ary apetrakao amin'ny hafainganam-pandeha miadana indrindra ny 1 ary amin'izay dia tsy maintsy mandeha tsara ho anao ry zareo.
Salama aho te hahalala hoe firy ny olona no mandray anao ary indrindra fa io iray amin'ireo bibikely misy potato, misaotra
Salama Raquel, ho an'ny olona 4 izy ireo amin'ny ankapobeny. Mirary ny soa indrindra.
MARIA Joses dia hoy izy:
Silvia, zavatra mitovy amiko no nanjo ahy toa an'i Paula, nivoaka ny lolo ary nilatsaka ny ovy. Saingy, afaka manao saosy matevina ianao avy eo ary sasao miaraka aminy ny taolan-tehezana. Nametraka fotoana bebe kokoa aho, satria mbola henjana ihany ny hena.
Manantena aho fa ho tian'ny fianakaviako rahampitso.
Valio amin'i MARIA Joses
Maria Jose, tsy maintsy milaza aminao aho fa misy fitenenana manao hoe: "Tsy hatory mihitsy ianao raha tsy mahafantatra zavatra iray hafa." Eny, mihoatra noho ny hatramin'izay ny zava-nitranga tamiko androany, rehefa namaly an'i Paula aho dia takatro fa io no fomba tsara hametrahana ny lolo mba tsy hialany amin'ny lelany ary izany, raha hitodika miankavanana ny lelany. . Tamin'ity faran'ny herinandro ity tao amin'ny kongresy thermomix dia nianatra zavatra tena lojika aho, raha hivily miankavia ny lelany aorian'izay dia tsy maintsy apetrakay ary avadika kely miankavia, marihina fa niraikitra tsara izy ireo, raha nampifamatotra azy ireo izahay. ny havanana ary nivily miankavia ny zavatra azo antoka indrindra dia ny hivoaka.
Ka amin'ny manaraka dia efa mahalala zava-baovao ianao tahaka ny nanjo ahy.
Salama zazavavy !! Tiako ny tranonkalanao izay vao hitako. Raha ny fotoana, raha mihena ny habetsanao dia mila mampihena ny fotoana ianao? Mihobia ary misaotra noho ny resipeo.
Tsy misy Marta, raha mahavita kely ianao dia tsy hihena ny fotoana, satria ny ovy mila izany fotoana izany ho malefaka sy amin'ny fotoana ilana azy. Na dia tsara tokoa ity fomba fahandro ity ka toa kely izany na tsy hampaninona anao ny hanana azy indroa.
Ankizivavy, milelaka tsara ny rantsan-tànana. Ananako ny TM-21 ary navelako tamin'ny mari-pana hoy ianao, satria tsy tianay be lasopy izany. Nivoaka izy hamerina. Misaotra anao nanampy.
Marta, faly aho fa tianao izy ireo. Misaotra betsaka anao nahita anay. Mirary ny soa indrindra.
Gemma Saez dia hoy izy:
Omaly no nataoko ity recette ity ary ny fahasoavako no nahomby! Mahagaga, misaotra betsaka
Valiny tamin'i Gemma Sáez
Gem, tena faly aho fa ho tianao ity fomba fahandro ity. Ny marina dia fahombiazana ho an'ny fianakaviana iray manontolo.
PATRY dia hoy izy:
Vao avy nanao an'ity recette ity aho… tiako io !! Mora sy manankarena ahoana. Vao tsy ela izay dia nanana ny TM aho ary nahitana zavatra ny pejinao. MISAOTRA
Valiny amin'i PATRY
Patry Faly aho fa tianao ny fomba fanamboaranay ary mamporisika anao izy ireo mba hampiasa tsara an'ity robot super ity, misaotra anao nanaraka anay.
Tongasoa Patry!. Faly aho fa tianao izany ary antenaiko fa manampy anao ireo fomba fahandro ireo mba hahazoanao tombony betsaka amin'ny Thermomix. Masinina mahafinaritra izy io. Mirary ny soa indrindra.
marimar dia hoy izy:
Ity fomba fahandro ity fa tsy atao amin'ny taolan-kisoa dia azo atao amin'ny hena mahia? Mitovy ny fanomanana na mila fotoana fandrahoana hafa.
Mamaly an'i marimar
Marimar Heveriko fa azo omanina izy ity fa ny hena mahia dia mety mila fotoana bebe kokoa handrahoana azy ho malemy ary angamba potipotika kely ny ovy. Omeo fotoana kely kokoa ny hena alohan'ny hanampiana ovy ary jereo ny fomba fiasa.
Efa nomaniko izy ireo tamin'ny alàlan'ny fametrahana ny hena alohan'ny ovy mandritra ny roapolo minitra eo ho eo mba hitohizan'izy ireo ary tiako ny mampifanaraka an'io recette io amin'ny thermomix satria tianay izany. Manampy rano aho na avelako hitovy amin'ny an'ny resipeo . Misaotra anao
Salama Inma, ny fomba fahandro amin'ny hena dia ny fomba nanamboaranao azy, saingy miankina betsaka amin'ny karazana hena ampiasainao izany satria misy ny sasany izay tena mafy. Raha malefaka ny hena, izay ataoko mandritra ny 40 minitra dia tokony ho ampy ary raha ny rano dia ampiako 100 gr. Bebe kokoa. Mirary ny soa indrindra.
Marimar, asio rano 200 gr ary fandrahoan-kena mandritra ny 30 minitra avy eo apetraka ny ovy ary apetraho ao anaty resipeo ny fotoana voatondro raha hitanao fa ampy ny rano ao anatin'ny 10 minitra farany dia esory ny kaopy ary ampio izy hanafoana ny rano . Andramo dia holazainao amiko. Mirary ny soa indrindra
Angeles dia hoy izy:
Salama, vaovao aho amin'ity, manomboka aho, efa nahandro mofomamy, croquette, pizza, lentil ary faly aho fa tiako ny fomba fahandro, ny takiana ary ny mora.
Fa ny olako dia ny mahandro sakafo ho an'ny zanako 2 taona sy ho an'ny tenako ary ny kobanina dia ho an'ny olona 4 na mihoatra.
Raha tapahiko amin'ny antsasany ny resipeo dia tsara ihany izy ireo.
Ny tiako hatao izao dia ny ovy voatoto miaraka amin'ny taolan-kisoa.
Tsy ny vitanao ihany no tokony hampihenanao ireo akora ilaina, fa ny fotoana koa. Rehefa mandeha ny fotoana dia ho azonao ilay izy !!
Na izany na tsy izany dia lazao aminao fa isaky ny fomba fahandro dia ho hitanao ny isan'ny fisakafoanana. Safidy hafa koa ny mangatsiaka, azo ampiharina amiko !!
Salama ... Te hanao ilay flan nougat aho ... mijery Internet aho fa tsy hitako ... aiza izany? Misaotra betsaka
Sonia, havoakanay ny flan nougat afaka andro vitsivitsy mba hahafahanao manamboatra azy amin'ny Krismasy.
Vao nahita an'ity pejy ity aho ary tiako ilay izy, manana tovovavy celiac aho, raha azo atao dia tiako ny nametrahanao fomba fahandro bebe kokoa na ireo akora azo soloina, satria hitako fa manana resipeo mahafinaritra be ianao. fiarahabana
Valiny amin'i AURORA
Aurora, mazava ho azy fa hanohy hametraka fomba fanamboarana vaovao azonao atao ho an'ny madininao izahay. Ao amin'ny bilaoginay, etsy ambony dia misy takelaka milaza hoe celiacs, manome anao ny resinay navoaka rehetra azonao raisina. Na dia manana zanak'anabavin'ny celiac aza aho dia tsy fantatro hoe inona ny akora sasany azonao soloina azy ireo. Fa mariho fa ny fomba fahandro vaovao izay avoakanay dia voatanisa avokoa raha afaka mandray azy na tsia ny celiac.
jose "RAM" dia hoy izy:
Salama, araka ny nolazaiko taminao, nataoko ity lozako mahavokatra ity ary nivoaka avy tamin'ny fahafatesana isika, tsy namela na dia lavaka aza. Zavatra kely hafa azafady, lazao amin'ny vadiko (Montse) fa rehefa ataoko ny sakafo avelany ho ahy, inona no ataonao aminao? raharaha ary tsy avelako irery irery miaraka amin'ny vilaniko aho. Misaotra anao
Mamaly an'i Jose "RAM"
Heh heh José. Ny milaza ny vadinao zavatra iray dia tsy ho vita satria mifanohana isika ary na dia mahandro anay aza ianao dia tianay ny manara-maso dia toy izany izahay, teraka tamin'io toetra io izahay, voajanahary izany.
Faly aho fa ho tianao ity lovia ity ary hankafizinao ao an-trano miaraka amin'ny bilaoginay. Miarahaba antsika roa.
NARCI dia hoy izy:
Salama maraina, nataoko ny recette, napetrako tao ny lolo, tsy nidina io, fa ny ovy rehetra potraka, satria tsy maintsy nametraka 10 minitra fanampiny aho mba hampalemy ny taolan-tehezana. Ny tena marina dia nahafinaritra tamin'ny tsiro izy io na dia tsy dia bika loatra aza, dia lasa taolan-tehezana !!! Amin'ny manaraka dia ataoko aloha ny hena ary ny ovy farany.
Tiako ny resinao, tohizo !!!
Valiny amin'i NARCI
Narci, raha apetrakao ny lolo dia tsy voatery hovonoina izy ireo. Azoko an-tsaina fa hohook ny lolo ary izany indraindray satria tsy namboarintsika tsara tamin'ny lelany. Tokony apetrakao izy io ary avadiho kely mankany amin'ny ilany izay hivadika ny lelany avy eo.
Manantena aho fa izany no fiasa ho anao. Mirary ny soa indrindra
Efa nitranga tamiko indroa koa io ary satria tsy nifikitra tsara ilay lolo dia namela
Valiny tamin'i Juanan
Hanandrana ny fomba fahandro aho avy eo, ary holazaiko aminao fa, fomba hafa, ireo resipeo hafa izay nanandramako tamin'ny pejinao dia nivadika ho tsara.
Salama! Nanana thermomix aho taona vitsivitsy lasa izay ary tsy nanararaotra izany mihitsy. Andro maromaro lasa izay dia nanadihady aho dia nahita anao. Eto an-trano ny ray aman-dreniko ary tian'izy ireo ny sakafom-biby kely. Omaly aho nanao ny vary tamin'akoho sy sono, ary androany ny tsaramaso fotsy misy sofina, ary tian'ny raiko izy ireo !!. Nilaza izy fa izaho no nitarika ny reniko haha! Miarahaba anao aho ary misaotra betsaka anao nizara ny resinao. Famihinana.
Faly aho fa tianao ny fomba fahitanay. Manoro hevitra ny laoka legume amin'ny epinara aho, tsara izany azo antoka fa tian'izy ireo izany. Jereo ao amin'ny index.
gepy dia hoy izy:
Androany no nanamboarako azy ireo hisakafo hariva, ary tian'izy ireo izany. Ny taolan-tehezana dia mbola tsy nasiana marinara. Tsiro tena tsara fa tsy maintsy lazaiko fa somary mafy aho, ary ovy vitsivitsy monja no navotako, saingy tsara. Heveriko fa amin'ny manaraka dia avelako ny taolan-tehezana lava kokoa, hametrahana ovy, marina ????. Misaotra an'ireo resipeo. Mirary ny soa indrindra
Valio i Gepy
Eny, andramo apetraka ao anaty minitra vitsy ny taolan-tehezana avy eo apetraka ny ovy. Na izany aza, lovia tena tsara ao an-trano tianay izany ary matsiro ny taolan-tehezana.
Misaotra anao, Silvia aho. Tena tsara izy ireo. Mirary ny soa indrindra
Salama!! Vita tamin'ny taolan-tehezana fotsiny ny ovy ary hita fa tsara !! Mazava ho azy fa taolan-tehezana voahosotra izy ireo ary efa nandrahoiko kely teo aloha mba hanesorana ny tavy sy ny marinade sasany (ho an'ny zanako lahy mihoatra noho ny zavatra rehetra). Hotantaraiko anao ny tsirony. Miarahaba anao!
Azo antoka fa matsiro izy ireo. Lazao aminay hoe ahoana izany.
Tsara !!!!! Tena nitandrina aho mba hijery tsara ny lolo ary tena tsara ny vokany. Misaotra !!
Fahafinaretana toy inona moa izany, rehefa avy nandany ny fotoanantsika sy fikarakaratsianay hanomanana fomba fahandro dia mivoaka amin'ny 10. Faly aho fa tianao ilay izy.
ana bel dia hoy izy:
Manao azy aho ary mahafinaritra ny fofona. Fa ny taolan-tehezana no nosoloako tratra. (tsy tokony hihinana henakisoa) Eto andalusia misy lasopy atao hoe akoho misy "ovy", tsy nanandrana mihitsy aho raha tsy tonga teto fa matsiro, nomeko 10 minitra latsaka alohan'ny ovy holazaiko anao
Mamaly an'i ana bel
Hevitra tsara izany, satria ho an'ny ankizy dia mety izany, tsy matanjaka mihitsy izany ary mihinana akoho tsara kokoa.
SOA TSARA nataoko in-2 izy ireo, tamin'ny 1 mafy ny taolan-tehezana ary avelako hahandro bebe kokoa izy ireo alohan'ny hametrahana ovy dia nanampy rano marobe handrahoana sakafo koa aho, ho fomba fahandro matetika ao an-dakozako, avy amin'ny làlana ho an'ny Ny manaraka dia mila mametraka ovy bebe kokoa aho no tian'izy ireo. Misaotra
Tian'izy ireo koa izany ao an-trano, faly aho fa entanina ianao hanova ny fomba fahandro arakaraka ny itiavanao azy. Mirary ny soa indrindra
Tena matsiro…. Mbola misy saosy matevina, fa ny ovy sy ny taolan-tehezana mety fotsiny. Ho ampahany amin'ny boky fahandro mahazatra ahy izy io satria mora sy haingana. Misaotra anao amin'ny zavatra rehetra ampianarinao anay… Fiarahabana avy any Gipuzkoa.
Tany tsara ry Susana. Tsy avy any aho fa tiako ny avaratra sy izany faritra rehetra izany. Faly aho fa tianao ity fomba fahandro ity ao an-trano, mahazatra izany. Omeko be dia be izany.
Salama, manana fanontaniana momba ny lolo aho, mamaky ny hevitra momba ny fametrahana azy io mba tsy hivoahan'izy ireo, miankina amin'ny fihodinan'ny lelany, tamin'ny voalohany rehefa napetraka izy ireo dia mivily miankavanana ary avy eo ny avaratra nampiasaina ka tsy maintsy ahitsy amin'ny fomba mitovy. ilaina ve ny manafoana ny vilia baolina sa azo atao vera feno izany? Misaotra
Tsy ilaina ny manafoana ny vera, indraindray aza amin'ny alàlan'ny fametahana azy tsara amin'ny ankavanana dia efa miraikitra tsara izy io ary tsy mivoaka na dia amin'ny dingana manaraka dia miankavia izy. Azo antoka fa tsara ho anao izy ireo.
Salama Silvia, tiako ny resinao, andao ho hitanao raha afaka mamaly ny fanontaniako ianao: azonao atao ve ny manamboatra ny amboaram-boankazo miaraka amin'ny fomba fahandro mitovy nefa ny antsasaky ny vola? Izany fotsiny fa izahay roa, izaho sy ny zanako ary ny fomba fahandro tena be . Te-hihinana ovy sy henan-kisoa aho. Misaotra anao
Valiny amin'ny anjely
Mazava ho azy fa anjely! Ahenao amin'ny antsasaky ny vola dia hanana sakafo ianao mandritra ny 2. Mazava ho azy, mitandrema amin'ny fotoana fandrahoan-tsakafo sy fikolokoloana. Afa-tsy ny ovy sy ny taolan-tehezana (izay tsy jerena ny habetsany dia mila fotoana mitovy ihany izy ireo hahandroana) ny ambiny tsy maintsy ahenao kely, ok?
fahasivy dia hoy izy:
Nasiako sôkôla sy cookie cookie. Ny raiko dia hanao an'izany ho anay ary manadio ny lovia izahay. Mofomamy sôkôla roa na telo ary totoina cookie iray, apetrako minitra vitsy alohan'ny hamaranana azy, izay vao miempo ao anaty ron-kena ary… milelaka ny rantsan-tànanao.
Misaotra ny recette, ataoko ao anaty vilany foana izany, ezahako ho hitanao hoe ahoana ny vokany.
Mamaly an'i noave
HI Noave, uhmmmm, ahoana no tokony hahatongavanao…. mandray an-tsoratra izahay.
Salama zazavavy, sambany aho no manoratra aminareo, na dia nanao ny sasany amin'ny resipeo aza aho ary tsara izy ireo, saingy ny ovy misy tsirony avy amin'ny tsirony dia nanjary tena tsara, saingy nodiovina ny ovy na dia nanaraka ny fomba fahandro amin'ny tongotry ny taratasy. Manana ny tm21 aho ary mametraka ny lolo sy ny hafainganam-pandeha 1 araka ny filazanao fa tsy mandeha tsara, tsy fantatro ny antony mety, hitako raha nivoaka ny lolo ary teo amin'ny toerany, tiako izany raha afaka manampy ahy ianao.
Indraindray ny karazana fitaoman-ovy ... tsy samy manana ny mampiavaka azy avokoa. Ampiasao amin'ny manaraka ny Fénix, ny Flamenco na ny Monalisa… izay tena tsara amin'ny fanaovana koba!
Salama Mayra. misaotra anao mamaly ahy. Amin'ny manaraka dia hojereko izany ary hataoko amin'ny ovy izay lazainao ahy, satria tianay be izy ireo amin'ny tsiro.
Holazaiko aminao, misaotra sy oroka.
manantena dia hoy izy:
Tsy haiko hoe aiza no hametrahana an'io fanehoan-kevitra io, heveriko fa azoko apetraka eto. Satria somary matanjaka ny krizy dia izao aho manao resipeo maro ho an'ny thermomix sotro. Androany aho nanao ovy voatoto masaka, dumplings natsipy tao anaty lafaoro Ka mandany kely ny menaka sy ny mofomamy Napoleon ho an'ny tsindrin-tsakafo. menu tsy lafo sy tena tsara.
Valio ny fanantenana
Salama maraina, niaraka tamin'ny Thermo nandritra ny telo herinandro aho, vao manomboka izahay, fa tena faly amin'izany.
Manontany zavatra iray aho, omaly nataoko ny recette ho an'ny taolan-tehezana misy ovy, nivoaka be ny ovy ary ny saosy koa, fa kosa mafy ny taolan-tehezana, misy torohevitra ve?
Misaotra betsaka ary mankafy ny sakafonao.
Valiny tamin'i Marisa
Heveriko fa izany dia noho ny hamafin'ny hena, ka angamba azonao atao ny mangataka amin'ilay mpivaro-kena mba hanapaka kely azy io. Ary raha tsy amin'ny dingana ampidiranao ny rano 100 grama dia aleo mametraka 150 grama ary asio 15 minitra (fa tsy 10), 100º, hafainganana 1.
Salama Carolina, ho an'ny olona 4 ny fomba fahandro. Hilaza aminay ianao raha tianao izany! Misaotra nanoratra taminay.
Salama Belén, efa nanjo anao io satria somary henjana ny hena taolan-tehezana ary mila fotoana bebe kokoa. Izany no nahatonga ny vilany fandrahoana tsindry nanjary tsara, satria toy ny hoe napetrakao indroa na mihoatra ny fotoana fandrahoana azy. Andramo avela intsony izy ireo amin'ny manaraka. Tsara vintana!
Angels Monteys Pujol dia hoy izy:
Ny ovy taolan-kisoa fotsiny no nataoko. Zavatra tsotra sy matsiro miaraka amin'izay. Adobe ny taolan-tehezana ary malefaka be aho ary mety tsara ny ovy fa tsy lasopy mihitsy.
Valiny tamin'i Angels Monteys Pujol
Misy ny fomba fahandro sahaza ny lanjany amin'ny volamena, sa tsy izany?
Inona no amonoanao ny taolan-tehezana?
Manomana ny marinade nampianarin'ny rafozambaviko foana aho.
Tsotra be izy io. Ao anaty fotaka dia manorotoro sira tongolo lay aho, potipotehiko tsara dia tsara, ampiako oregano
Ary nopotsehiko koa izy io, paprika mamy ary menaka kely, afangaroiko tsara daholo ny zava-drehetra.
Ary amin'ity majado ity dia aparitako manerana ny taolan-tehezana ary avelako hipetraka mandritra ny 24 eo ho eo
ora. Manantena aho fa tianao izany. oroka
tsara, miaraka amin'ny oregano-
Raha tsy maninona ianao dia hifikitra amin'ilay resipeo.
Misaotra betsaka ary oroka !!
Famaranana nahandro, feno fankasitrahana ary tsotra.
Manitra izy fa mamelona
Azo atao ny manomana ny saosy ary ampitso ampiana ny ovy, avelako mandritra ny alina ny sakafo voaomana, fa ny ovy kosa tsy mitovy raha ajanona mandritra ny alina izy ireo, raha eny, ahoana no hataoko raha mampiditra ovy aho
Salama Esperanza, afaka mandroso ny fomba fahandro manontolo mandra-pahatongan'ny fotoana ampianao ovy:
«Apetratsika ao anaty vera ny tongolobe, tongolo gasy ary dipoavatra ary tetehina mandritra ny 4 segondra, haingana 5. Ampidininay ny sisa tavela amin'ny legioma avy amin'ny rindrina mankany amin'ny lelany miaraka amin'ny spatula.
Arotsanay ao anaty vera ny menaka ary endasina mandritra ny 10 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 1.
Apetratsika amin'ny lolo ny lolo, ampio ny taolan-tehezana sy programa 4 minitra, 100º, hafainganana 1.
Ampidiro rano 100 gr izahay ary programa 10 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 1. »
Avelanao hangatsiaka izy ary hitahiry azy ao anaty vata fampangatsiahana. Rehefa te hamita ny lovia ianao dia mirosoa toy izao manaraka izao:
«Arotsaka ao anaty vera ny votoaty rehetra ary asio programa 10 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 1.
Ampio ny ovy sy ny ravina bay. Sasao 3 minitra, 100º, mihodina miankavia, hafainganam-pandeha sotro.
Ampio ny rano sisa (200 gr) sy ny zava-manitra. Mandamina 22 minitra izahay, 100º, mivily miankavia, sotro ny hafainganam-pandeha, tsy mametraka ny beaker. Napetrakay teo ambony ny harona mba tsy hiparitaka. »
Hendry !! Lazao aminay ny fomba mety aminao. Famihinana sy fisaorana noho ny fanarahana anay 😉
Christina Gonzalez dia hoy izy:
Salama, nanao ny resipeo aho araka ny torolalana omenao ary efa ho adiny iray teo dia nivoaka mafy ny taolan-tehezana. Tena mety aminao ve? Satria tamin'ny farany dia nisafidy ny hametraka ny taolan-tehezana ao anaty vilany aho satria ataoko maty mosary ny ankizy ary tsy ho izany satria mbola tsy natomboka tamin'ny fotoana aho.
Valiny tamin'i Cristina gonzalez
Ny zavatra tsapako ... Angamba miankina amin'ny karazana hena izany ...
Bertha dia hoy izy:
Somary sarotra tamiko koa ny ovy
Valiny tamin'i Berta
Imbetsaka aho no nanao an'io resipeo io ary isaky ny tiako kokoa izany.
Efa nasiako ranonorana divay tsara amin'ny saosy, tsaramaso maitso, karaoty kely ary famafazana curry… Requetebuenas!
Misaotra betsaka anao amin'ny resipeo sy ny fanazavanao!
Misaotra Rachel! Endrey ny hatsaranao fa tianao izy ireo. Amin'ny fikitika anao manokana dia tsy maintsy matsiro izy ireo !!
Salama, voalohany indrindra, tiako ny bilaoginao !!
Ananako ny tm5 ary nataoko tamin'ity maraina ity io fandrahoana sakafo io .. tsy mbola nanandrana aho fa hiala sasatra maraina ... amin'ny mitataovovonana dia homeko hafanana kely ... antenaiko fa tsy hahomby ity sarotra izany ... andro tsy manam-potoana hisakafoanana sy hiasana fotsiny aho ...
Ny tranga dia nieritreritra aho fa ny fandrahoan-tsakafo namboarina dia nitovy tamin'ity iray nataonao ity, satria ny isany dia mitovy ary ny fotoana dia mitovy ... fa tsapako fotsiny fa amin'ny fandrahoan-tsakafo dia tsy milaza aho hoe napetrako ny lolo ... ary tsy ao amin'ilay boky ... Total, tsy napetrako ... ka tsy haiko raha hisy fiantraikany be izany ... Matahotra ny hody aho ary ity puree ity ...
Valiny tamin'i Sara
Salama Sara, misaotra tamin'ny fanehoan-kevitrao sy nanoratra anay! Mahafinaritra ny mahafantatra fa tianao ny bilaoginay 🙂
Indraindray, io fomba fahandro io ihany dia azo atao amin'ny fomba maro samy hafa ary ny mametraka ny lolo dia miankina indrindra amin'ny hatevin'ny hena sy ny habetsany. Raha mametraka sombin-javatra lehibe isika nefa tsy dia be loatra, raha tsy misy lolo dia hiasa tsara. Raha mifanohitra amin'izay no ametrahantsika hena betsaka dia ho masaka tsara kokoa amin'ny lolo. Lazao aminay ny vokany ho anao! Mety hoe amin'ny fitsaharana dia ho matevina tokoa, afaka manampy rano sy sira kely ianao rehefa mody sy manafana azy. Raha noho ny antony manorotoroana azy loatra dia mamporisika anao hampiasa indray ny sakafo ianao amin'ity fanomanana ity: http://www.thermorecetas.com/coulant-de-carne/ (Ny zavatra mitovy amiko dia nanjo ahy tamin'ny fomba fahandro am-bifotsy tao amin'ny zaridaina ...) ary nivoaka ity gaga ny coulant ity. Miarahaba 🙂
Andriamanitra ô, manao ahoana ny endrik'io mpanohitra io! Mikasa ny hanandrana azy aho na eny !!!
Omenao toky kely aho, satria ny antsasaky ny fangaro no nataoko. Amin'ity tolakandro ity dia holazaiko anao ny vokany. Saingy amin'ny manaraka dia hataoko feno izany ary manana ilay tompon'andraikitra aho hehe. Ary koa io gratin io dia mety amiko, satria any an-trano dia tsy dia tianay loatra ny bechamel ary nitady fomba fahandro ho an'ny puree aho hanoloana ny bechamel ao amin'ny cannelloni ary heveriko fa tsara izany !!
Hahaha raha ny tena izy dia ny improvisation no zava-nitranga taorian'ny nahitako ny loza goavana nananako tao amin'ny thermomix rehefa nosokafako ny sarom-baravarana ary hitako fa tsy nisy sisa tavela tamin'ny henan'ako ... mihoatra ny hena sy legioma ... fa ao an-trano tsy manary na inona na inona isika fa azo ampiasaina indray ny rehetra !! Ary toy izany no ivoahan'ny lovia matsiro sy mahafinaritra toy ny coulant. 🙂 Manantena fa tianao io !! Famihinana ary holazainao amiko tsara tarehy. 😉
Salama indray !! Miverina aho milaza aminao fa nahafinaritra ilay izy! Ny saosy dia efa tamin'ny fotoanany satria nampidiriko ny ranon'ny fomba fahandro fa ny antsasaky ny fangaro dia mihalehibe nefa mbola misy ron-kena, tsy namela 10 minitra 100 sotrokely sotro fotsiny aho ankavia. ary izay ilay izy, vonona ny hihinana! .. ny ovy mihena mpivady izay efa tsy natao intsony, ny ambiny dia vita tanteraka nefa masaka tsara, ny saosy matevina ary ny taolan-tehezana mamy! Naheno foana aho fa ny stews manomboka amin'ny andro iray ka hatramin'ny manaraka dia manandrana tsara kokoa, noho izany dia averiko azo antoka! amin'ny manaraka aho hanandrana lolo hijery raha tsy mitsonika koa ny ovy! oroka kely !.
Fifaliana toy inona moa Sara! Faly aho. Eny, ao amin'ny Thermorecetas dia ahitanao amboaram-boankazo sy legioma na hena maro izay ho tianao koa, famihinana! ary ... mahandro! 🙂
Pasta voatavo ho an'ny sandwich
Mofomamy amandy sy frezy